CPE ဖြင့် Wireless လွင့်နည်း , ဖမ်းနည်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
CPE ဖြင့် Wireless လွင့်နည်း , ဖမ်းနည်း
ဒီ post မှာ TP Link (TL-WA5210G) CPE ဖြင့်ေ၇းသားဖေါ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်...ပထမဦးစွာ ၀န်ခံပြောကြားလိုတာကတော့ ကျွန်တော်ဟာ CPE တပ်ဆင်ခြင်း ကို Professional မကျွမ်းကျင်ပါဘူး...ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သိသလောက် , လေ့လာထားသလောက်ကလေး ကိုသာေ၇းသားထားတာဖြစ်တဲ့ အတွက်လိုအပ်ချက်များ , မပြည့်စုံမှုများပါဝင် ခဲ့ပါက နားလည်ပေးကြပါလို့ .....
CPE က လား၇ာတဘက်ပဲလွင့်မယ်ဆို၇င် လွင့်မယ့်ဘက်က CPE တစ်လုံးထား၇ပါမယ်...ပြီးတော့ဖမ်းမဲ့ဘက်ကလည်း CPE တစ်လုံးထား၇ပါမယ်...ခပ်ဝေးဝေး အထိလွင့်ခြင်တယ်ဆို၇င် တော့ တိုင်မြင့်လေ ကောင်းလေပါပဲ...
ပထမဆုံး လွှင့်တဲ့ဘက်က CPE ကနေပြုလုပ်ကမည့် အချက်တွေကိုေ၇းပါမယ်
UTP Cable ကတော့ CAT6တွေကိုအသုံးပြု၇မှာဖြစ်ပါတယ်...Cable ကို Straight Cable ညပ်၇မှာဖြစ်ပါတယ်...အဲဒီနောက် CPE ဘူး၇ဲ့ RJ 45 Port မှာ ခုနကညပ်ထားတဲ့ UTP Cable ရဲ့ အစတစ်ဘက်ကိုချိတ်ပါ...နောက်အစတစ်ဘက်ကတော့ TP Link Adaptor ရဲ့ POE ဆိုတဲ့ RJ 45 port မှာ Connect လုပ်ပါ...ပါဝါ Adaptor ကိုပါဝါ ကျွေးပါ...နောက်ဘူးခွံထဲမှာ ပါလာတဲ့ RJ 45 Cable အဖြူေ၇ာင် အတိုလေး၇ဲ့ အစတဘက်ကို TP LInk Adaptor ရဲ့ LAN ဆိုတဲ့ RJ 45 Port မှာတပ်ဆင်ပါ အခြားအစွန်း တဘက်ကိုတော့ Computer ၇ဲ့ LAN Port မှာတပ်ဆင်၇မှာဖြစ်ပါတယ်....
ပြီး၇င်တော့ LAN Port မှာ ကြိုးတပ်ဆင်ထားတဲ့ Computer ဖွင့်ပါ... run box ထဲမှာ ncpa.cpl ဆိုပြီး၇ိုက်တည့်ပြီး enter နိပ်ပါ... ပေါ်လာမည့် Box ထဲမှာ Local Area Connection ကို right click ထောက်ပြီး properties ကိုခေါ်လိုက်၇င် အောက်ပါပုံအတိုင်း
By unique09 at 2012-03-15
TCP/IP V4 ၇ဲ့ properties ထဲကိုဝင်ပေးပါ....
Obtaion ip ထား၇ာကနေပြီးတော့ 192.168.1.1 (နောက်ဆုံးအလုံးကတော့ 1 to 253 မိမိနှစ်သက်၇ာကိုထားနိုင်ပါတယ် )
Subnet ကတော့ 255.255.255.0 လို့ထားပါ
ပြီးတာနဲ့ IE Browser ကနေပြီးတော့ 192.168.1.254 လို့၇ိုက်ပြီး Configure page ကိုဝင်ပါ...
user name နဲ့ password တောင်းတဲ့ boxကလေး ကျလာ၇င် user name ကော password ကော admin လို့၇ိုက်ပါ...အဲဒါဆို၇င် Configure page လေးကျလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်
Menu ထဲက Quick setup ကိုနိပ်ပါ ... ပြီး၇င် AP ကိုေ၇ွးပါ
နောက်ဆုံးမှာ save ကိုနိပ်ပါ
ဒါဆို၇င် လွင့်တဲ့ CPE ဘက်ကနေပြီးတော့ Configure အကြမ်းဖျင်းတော့ ချပြီးသွားပါပြီ
နောက် Security key ထည့်၇န်အတွက် Menu table ထဲမှ wireless > security setting > Disable Security ကို WPA-PSK/WPA2-PSK သို့ ပြောင်းပေးပါ
version ကိုလည်း WPA2-PSK သို့ပြောင်းပေးပါ
PSK Passphrase: နေ၇ာမှာ မိမိပေးချင်တဲ့ password ကို၇ိုက်ပါ ...အားလုံးပြီး၇င်တော့ ထုံးစံအတိုင်း save နဲ့ထွက်ပါ....
အခုဆို၇င်တော့ လွင့်မယ့် CPE အနေဖြင့် Configure အားလုံးချပြီးပြီလို့ဆိုန်ိင်ပါတယ်....
ဒီနေ့တော့ ဒီမျှလောက်နဲ့ ကျေနှပ်ကြပါလို့....ဆက်ေ၇းပါဦးမယ် ... (post ဆက်၇န်....)
Last edited by azp09; 15-03-2012 at 06:03 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 45 ဦးတို့မှ azp09 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုစံငြိမ်း, ဇာနည်စိုး, နည်းပညာချစ်ခင်သူ, နီထွန်းဦး, မုန်းလေး, မျိုးဟန်ထက်, လူမုန်း, သက်ပိုင်ဦး, သိန်းဇော်ဝင်း, ကျော်ကျော်မောင်, တော်ဝင်ကျား, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်ဖိုးစိုး, မောင်သံသရာ, အောင်မင်းကို, အောင်ကျော်ဆန်း, ဝေဟင်ဦး, ၀မ်းစတား, မြန်အောင်သား, aungphyo, bumarhacker, Chan Nyein Aung, fairywin, gam shawng, goldstar, ko lin, kyawminkhoung, KZaw, linthuraaung, min kyaw min, minthike, nandarnaing007@gmail.com, pannuko, phoetharlay, phyulayswe07, phyuphyukyaw, putty, sayarchan, thant zin tun, thetkokolwin, thuzaraung, tu tu, tunlinn, Win Naing Tun
ပြန်စာ - CPE ဖြင့် Wireless လွင့်နည်း , ဖမ်းနည်း
ကျနော်လက်ရှိသုံးနေတာလည်း 5210 G ပါခင်ဗျာ win xpနဲ့ပါ တကယ်လို့ win7ပြောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ် xp အသစ်ပြန်တင်ရင်
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ nandarnaing007@gmail.com အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နေစိုးလွင်, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, goldstar, linthuraaung, minthike, pannuko, phyulayswe07, Win Naing Tun
nandarnaing007@gmail.comေ၇.... CPE ကို Client အနေနဲ့သုံးတယ် လို့ထင်ပါတယ်... အဲလို သုံးတယ်ဆို၇င် window xp ကနေ window7ပြောင်း၇င် (ဒါမှမဟုတ်) window xp ကိုပဲ window အသစ်ပြန်တင်တယ်ဆို၇င် ဘာပြသနာမှမ၇ှိပါဘူး.... အကယ်၍ internet connection ပေးထားတဲ့ admin ကနေပြီး MAC address ကို Filter လုပ်ထားမယ်ဆို၇င် တောင်မှဘာပြသနာမှ ၇ှိမှာမဟုတ်ပါဘူး........
အောက်ပါအသင်းဝင် 17 ဦးတို့မှ azp09 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဘုန်းမြတ်, မိုးမိုးဝါ, ရုပ်ဆိုး, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်မင်းကို, bagothar85, Chan Nyein Aung, fairywin, Ka Ka Shi, linthuraaung, minthike, nandarnaing007@gmail.com, pannuko, phyulayswe07, Win Naing Tun
ပြန်စာ - CPE ဖြင့် Wireless လွင့်နည်း , ဖမ်းနည်း- (အပို&#
CPE ဖြင့် Wireless လွင့်နည်း , ဖမ်းနည်း- (အပိုင်း ၂)
ဒီနေ့ ဖမ်းမည့်ဖက်က CPE က လုပ်ဆောင်၇မည့် အကြောင်း ဆက်ေ၇းပါမယ်.....ဖမ်းမည့်ဖက် ကိုလည်း အပေါ်က post ကအတိုင်း configure page ထဲကိုေ၇ာက်အောင် browser ကနေ၀င်ပါ.....ပထမဆုံး network>LAN ၇ဲ့ ip ကိုပြောင်းပေးပါ..... (192.168.X.X) ပေါ့ နောက်ဆုံး က X နေရာတွေကို တော့အဆင်ပြေသလိုထားပါ .... ပြီး၇င် ထုံးစံအတိုင်း save လုပ်ပေါ့....အဲလို LAN ၇ဲ့ ip ကိုပြောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ browser ကနေ ပြောင်းလိုက်တဲ့ ip နဲ့ configure page ကိုပြန်ပြီးတော့ ၀င်ပါ....
ပြီး၇င် Quick Setup>next>AP Client Router>Dynamic ip>next>finish အတိုင်း ကလစ်နိပ်သွားပါ..
ပြီး၇င် wireless>wireless mood ထဲမှာ အောက်ဆုံးမှာ Survey ထဲကိုဝင်ပါ.....အဲဒီထဲကို ၀င်လိုက်၇င် AP list ကျလာပါလိမ့်မယ် အဲဒီ list ထဲကမှ မိမိ လွင့်ထားခဲ့တဲ့ SSID name ကို၇ှာပြီး ညာဖက် က connect ဆိုတာကို နိပ်ပါ...ပြီးတာနဲ့ Save ကိုနိပ်ပါ
wireless>Security Setting ထဲက ဟိုအောက်ဆုံးက WPA-PSK/WPA2-PSK ကို Version: ဆိုတဲ့ box မှာ WPA2-PSK သို့ပြောင်းပေးပါ... ပြီး၇င်တော့ PSK Passphrase: မှာ လွှင့်တဲ့ CPE မှာပေးခဲ့တဲ့ password ကို၇ိုက်ထည့်ပေးပါ...ပြီး၇င် Save နိပ်ပြီးထွက်ပါ....
ဒီနေ၇ာမှာ ဘူးနှစ်ဘူး ၇ဲ့ LAN ip address နှစ်ခုကိုေ၇ှ့ဆုံးက ip 3ခု လုံး တူအောင်မပေးပါနဲ့ ....ပြောချင်တာက..... ဥပမာ လွင့်တဲ့ CPE BOX ၇ဲ့ LAN ip ကို 192.168.10.1 ဆိုပြီးပေးခဲ့တယ်ဆိုပါတော့...... ဒါဆို၇င် ဖမ်းမယ့်ဖက်က CPE ၇ဲ့ LAN ip ကို 192.168.20.X လို့ပေးပါ.. အဲလိုမဟုတ်ပဲ 192.168.10.X ဆိုပြီးပေး၇င်တော့ ဖမ်းလို့၇မှာမဟုတ်ပါဘူး.....
ဖမ်းထားတဲ့ Signal အားကိုကြည့်ချင်၇င်တော့ wireless>Antenna Alignment ထဲကိုဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်...Remote RSSI: 10 dB ခန့်၇ှိသင့်ပါတယ်.....
MAC Filter လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်း ဆက်ေ၇းပါဦးမယ်.... ( Post ဆက်၇န် )
အောက်ပါအသင်းဝင် 21 ဦးတို့မှ azp09 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇာနည်စိုး, နီထွန်းဦး, တော်ဝင်ကျား, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်မင်းကို, Chan Nyein Aung, fairywin, goldstar, Htunlin, Ka Ka Shi, ko lin, minthike, nandarnaing007@gmail.com, phyuphyukyaw, PyaitSone, sayarchan, tu tu, winaingso, zarmany
အဓိက ကတော့ configure ဆိုတာကြီးပါဘဲ ကျနော်သုံးနေတာကို အစကနေရှင်းပြပါမယ် skynet ကနေ router ..router ကနေ တိုင်ပေါ်
တင်ပြီးပေးထားပါတယ် အဲဒါကို TP link wireless adaptor အသေးလေးနဲ့ ဖမ်ပြီးသုံးပါတယ် အဲဒါကိုအားမရလို့ 5210G ၀ယ်ပြီးသုံးပါတယ်
ဆိုင်က လာလုပ်ပေးပါတယ် configure လုပ်တာတို့ pin တာတို့ ပေါ့ဗျာ အဲဒီမှာ ကျနော်လန့်နေပါပြီ ကျနော်တခုမှမသိပါဘူး သုံးနေရင်းနဲ့လည်း အဲဒီအပိုင်းကိုမကလိရဲတော့ပါဘူး ပေးလိုက်ရတာလည်းများတယ်လေ(ပိုက်ပိုက်)၊၊ သူတို့ ကိုမေးကြည့်ပါတယ် win ပြန်
တင်ရင်ဘာလိုမလဲလို့ဆိုတော့ဘာမှမလိုပါဘူးတဲ့ IP တို့ subnet တို့ကိုပြန်ထည့်ပေးရုံဘဲတဲ့အဲဒီတော့ကျနော် win အသစ် xp or7တင်
မယ်ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့ driver တွေ run ပေးမယ်ပြီးရင် နံပါတ်တွေပြန်ထည့်ပေးမယ် ဒါဆိုရင် net သုံးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား configure တွေ
pin တာတွေပြန်လုပ်ရမှာလား(မှတ်ချက်၊၊ ၊၊ မလုတ်တတ်ပါ မလုပ်ချင်ပါ) ဖြေပေးပါနော် ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ nandarnaing007@gmail.com အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, kyawminkhoung
ကျွန်တော့်ပီစီမှာ အခု TP link wireless adaptor စတစ်လေးနဲ့သုံးနေပါတယ် မော်ဒယ်က TL - WN722N ပါ တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဘယ်ပီစီကိုပဲ တပ်တပ် သုံးလို့ရပါတယ်။ဘာip မှပြင်စရာမလိုပါဘူး သူ့အလိုလျှောက် သတ်မှတ်ပြီးသားပါပဲ။ သူရဲ့ DRIVER ကိုတော့တင်ပေးရတာပေါ့လေ။
nandarnaing007@gmail.com ရဲ့ 5210G ကိုမသိပါဘူး။ ကျွန်တောအကြံပေးချင်တာကတော့ တခြား ကွန်ပျူတာနဲ့အရင်တပ်ပြီးစမ်းကြည့်ပါ။ အဲဒီမှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ယခုလက်ရှိကွန်ပျူတာကို windows ပြန်တင်လို့ရပြီပေါ့
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ နိုင်သူရ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, azp09, nandarnaing007@gmail.com
Originally Posted by nandarnaing007@gmail.com View Postနံပါတ်တွေပြန်ထည့်ပေးမယ် ဒါဆိုရင် net သုံးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား configure တွေ
nandarnaing007@gmail.comေ၇ ပုံမှုန် ဆို၇င်တော့ အဲဒီနံပါတ် ဆိုတာတွေတောင် ထည့်စ၇ာမလိုပါဘူး ....အဲဒီနံပတ်ဆိုတာက nandarnaing007@gmail.com ၇ဲ့ computer က tcpip configure ကိုပြောတာလို့ထင်ပါတယ်...အောက်ဖေါ်ပြပါပုံအတိုင်းပေါ့
ပုံမှုန် ဆို၇င်တော့ အဲလိုနံပတ်တွေတောင်ထည့်စ၇ာမလိုပါဘူး...ဘာလို့လဲဆိုတော့ Router ကနေ DHCP enable ထားကြတော့...router ၇ဲ့ DHCP ကနေ ip ချပေးပါတယ်....ဆိုတော့ user ကိုယ်တိုင် ip ဖြည့်စ၇ာမလိုပါဘူး.....ဒါပေမယ့် DHCP ကို disable ထားပြီး static ထား၇င်တော့ ကိုယ်တိုင် ip ကိုဖြည့်ပေး၇မှာပေါ့..........အဲလိုလုပ်တဲ့သူကတော့ မ၇ှိသလောက်၇ှားပါတယ်..တစ်ချို့သော admin များသာ security အတွက် ip ကို static ထားတတ်ကြပါတယ်...
အများအားဖြင့်ကတော့ Obtain ထားကြပါတယ်...သေချာချင်၇င်တော့ run box မှာ ncpa.cpl ဆိုပြီး၇ိုက် ပါ ပြီး၇င်ပေါ်လာမည့် box မှာ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ NIC interface ကို right click properties ထဲကိုဝင်ပါ ပြီး၇င် internet protocal version4(TCP/ipv4 ) ကလစ်ထောက်လျှက် အောက်နားက properties ထဲကိုဝင်ပါ...အဲဒီမှာ obtain ထားလား static ip သတ်မှတ်ထားလားကြည့်နိုင်ပါတယ်....
nandarnaing007@gmail.comေ၇ မေးထားတာကို အနှစ်ချုပ်ဖြေ၇၇င်တော့..........
Client CPE ကို lan ကနေချိတ်ထားတဲ့ computer ကို window အသစ်တင်မယ်ဆို၇င်... ပုံမှုန် window တင်သလိုပဲတင်ပါ...ပြီး၇င် window အတွက်လိုအပ်တဲ့ driver တွေကို အ၇င်အတိုင်းပဲ ပုံမှုန်တင်ပါ.... TCP ip နေ၇ာမှာ ဖြည့်၇မလား , မဖြည့်၇ဘူးလားဆိုတာ ကတော့ လွင့်သော CPE (သို့) Main router ကို configure ချထားတဲ့ ပုံစံ အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်လို့ပဲ ဆိုပ၇စေ.....
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ azp09 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဝင်း, ဇာနည်စိုး, နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်မင်းကို, bagothar85, crush, goldstar, kingofvirus, ko lin, nandarnaing007@gmail.com, tu tu
ပို့စ်4ခုအတွက် 27 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ခင်ဗျာ အခုနောက်ပိုင်း ကွန်ပျူတာတွေကို IP သိပ်မပေးကြတော့ပါဘူး DHCP ပဲထည့်ပေးထားကြ တယ်။ DHCP ဆိုတာက သူ့အလိုလို IP တွေချပေးတာပါ။ Static IP ဆိုရင်တော့ ကိုယ်တိုင် ပြန်ရိုက်ထည့်ပေးမှ အင်တာနက်ပြန်သုံးလို့ရမှာပါ။ CPE တွေဖမ်းတာ လွှင့်တာတွေကို လုပ်ချင်ရင် Network သမား အများစုက ကိုယ့် idea နဲ့ကိုယ်လုပ်ထားတာ များပါတယ်။ 5210G မှာလည်း ဘာ mode နဲ့ သုံးထားလဲ သိရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မလုပ်တပ်သေးခင် မသိရင် Network ဆင်ပေးတဲ့သူကို မသိတာ မေးထား နိုင်ပါတယ်ဥပမာ . . . repeater mode တွေပဲထားတဲ့သူကထားပါတယ်။ အဲဒါဆို signal အားအရမ်းကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်တာနက်သုံးရင် သိပ်အဆင်မပြေတာ များကြတယ်။ client mode က signal အားမကောင်းပေမယ့် သုံးရင် အဆင်ပြေနေတာမျိုးတို့။ လို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူညီကြပါဘူး။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ phyokyaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်မင်းကို, bagothar85, crush, nandarnaing007@gmail.com, phyulayswe07, tu tu
Find More Posts by phyokyaw
ကျွန်တော်လည်း တစ်ခုလောက်သိချင်တာလေးမေးပါရစေဗျာ .....
အခုနောက်ပိုင်း ရောင်းတဲ့ Wimax ကလိုင်းမိ နည်းတဲ့ဧရိယာမှာရှိနေတယ်ဗျာ ....(တစ်တုံးတော့မိပါတယ်)
အနီးနားက ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာတော့ ကောင်းကောင်းမိတယ် ... လိုင်းကောင်းတယ် (သူတို့ကအင်တာနာတပါထားတယ်)
Redlink ကတာဝန်ရှိသူတွေကို ဖုန်းဆက်မေးတော့ အင်တာနာ တပ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ် ...
ကုန်ကျစရိတ်က 8 သောင်းကနေ 1 သိန်းခွဲဝန်းကျင်ရှိမယ်လို့ပြောပါတယ် ..။
သူတို့က ဘယ်လိုအင်တာနာ အမျိုးအစားမျိုးအသုံးပြုရပါလဲခင်ဗျာ .....
အကိုကြုံဖူးရင် အကြံလေးပေးပါအုံး .........
Last edited by juwathan; 09-04-2012 at 02:54 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ juwathan အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သက်ပိုင်ဦး, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ
ကျနော် win2ခုလုံးပေါ့7& xp တင်တယ်တညလုံးဘဲ ဘာမှအခက်အခဲမရှိ အဆင်ပြေတယ်7ကတော့ဘာမှမလိုဘူးတန်းရတယ် xp ကတော့ driver လေးရယ် နံပါတ် လေးရယ်ပြန်ထည့်ပေးရတယ် ပြီးတော့
တန်းသုံးယုံပါဘဲဗျာ ကျေးဇူး အရမ်းတင်ပါတယ် azp09 ရေ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ nandarnaing007@gmail.com အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
juwathan ရေ ကျနော်ဖြေပေးကြည့်မယ်နော် သူတို့လာတပ်ရင်လည်း TPlink 5210G ဘဲလာမှာပါ ၀ယ်ဈေးက ၃၇၀၀၀ ပါ
လုပ်ခကိုပိုယူမှာပါ ကျနော်ကတပ်ထားလို့သိတာပါ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ဝယ်ပြီး အပေါ်က azp 09 ပြောသလိုသာလုပ်ပါ သူတို့
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ nandarnaing007@gmail.com အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်စိန်ရွှေ, မောင်ဖိုးစိုး, မောင်သံသရာ, အောင်မင်းကို, azp09, tu tu
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် nandarnaing007@gmail.com နဲ့သူငယ်ချင်းများခင်ဗျာ .... ။ အခုလိုသိရတာ ဗဟုသုတလည်းရပါတယ် ။
တကယ်လို့တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင် ဝယ်တပ်မယ်ဆိုရင်တော့ တခါထပ်ပြီး မောင်းတီး ပရစေဗျာ ....။ azp09 လည်းမျက်ခုံးသာလှုပ်နေပေတော့ အကိုတို့ဆားဗစ်လုပ်ရင်လည်း အကိုတို့ကိုခေါ်ပရစေ ......။
ပြောချင်တာကတော့ ထပ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ juwathan အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပြန်စာ - CPE ဖြင့် Wireless လွင့်နည်း , ဖမ်းနည်း (အပိုင်း ၃ )
CPE တပ်ဆင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ဆင်ကြတာကိုတွေ့၇ပါတယ်...
တစ်ချို့ ကလည်း wireless router တစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့ (skynet ဆို၇င်လည်း skynet box to wireless router ..... ပြီးတော့မှ wireless router မှ တဆင့် လွင့်မယ့် CPE ဘူးတွေဆီသို့ သွားကြပါတယ်
တစ်ချို့ကတော့ switch ၀ယ်ပြီးတော့ ( skynet box to switch ..... ပြီးတော့ မှ လွင့်မယ့် CPE ဘူးတွေဆီသို့ သွားကြပါတယ်....
ပထမဆုံး ကိုယ့်၇ဲ့ wireless router ထဲကနေပြီးတော့ MAC filter လုပ်ကြပုံကိုေ၇းပါ့မယ်....ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့မှာ၇ှိတဲ့ linksys wireless router နဲ့လုပ်ပုံကို ဖေါ်ပြပါ့မယ်...
ပထမဆုံး router ၇ဲ့ configure home page ထဲကိုဝင်ပါ......
wireless> wireless MAC filter ထဲကိုထပ်ဝင်ပါ .... ပြီး၇င် ပုံပါအတိုင်း Wireless MAC filter disable ကို enable ပြောင်းပါ.... ထို့နောက် Permit PCs listed below to access the wireless network ကိုပြောင်းပါ
ဆက်လက်ပြီး wireless client list အောက်မှ MAC 01 ဘေးတွင်မိမိ ပေးသုံးစေချင်သော tplink ဘူး၇ဲ့ wireless Mac address ကိုဖြည့်၇မှာဖြစ်ပါတယ်.... အဲဒီ MAC address ဟာ tplink ဘူး ၇ဲ့ wireless MAC address ဖြစ်၇မှာဖြစ်ပါတယ် .... LAN MaC address ဆို၇င်မ၇ပါဘူး .... အဲဒီနှစ်ခု က မှားတတ်ပါတယ်.... Lan Mac address နဲ့ wireless Mac address နောက်ဆုံး ကဏန်းတစ်ခုကွာပါတယ်..... အောက်ဖေါ်ပြပါပုံတွင်လည်း Lan Mac address နဲ့ wireless Mac ကွာတာကို ကြည့်၇ှုနိုင်ပါတယ်
ပြီးပြီဆို၇င်တော့ ထုံစံအတိုင်း save ကို နိပ်ပြီး router ထဲကနေထွက်ပါ... ဒါဆို၇င်တော့ Mac filter ကို wireless router ထဲကနေလုပ်တဲ့ ကိစ္စ ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်.... ကျွန်တော့ Linksys wireless router မှာတော့ ပုံမှာတွေ့တဲ့အတိုင်း wifi device အလုံး 50 အတွက် MAC filter သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်
တစ်ခုသတိပေးချင်တာက wireless routerေ၇ာ tplink ဘူးတွေအားလုံးကော ၇ဲ့ အထဲကို ၀င်တဲ့ default user name နဲ့ password ကိုတော့ ပြောင်းဖြစ်အောင် ပြောင်းထားပါ (CPE ဘူးထဲကို ၀င်တဲ့ Lan ရဲ့ ip ၇ယ် user name နဲ့ password ကိုပြောင်းပြီး၇င်လည်း သေသေချာချာလေးမှတ်ထားဦးနော် ....... အကယ်လို့မေ့သွား၇င် CPE ဘူး၇ဲ့ အောက်ခြေက reset ခလုတ်ကို နိပ်ပြီး reset ချ၇မှာ.... တိုင်အမြင့်ကြီးမှာ တင်ထားတဲ့လူဆို၇င် reset ခလုတ်ကို နှိပ်ဖို့မလွယ်ကူလို့ပါ )
Last edited by azp09; 21-04-2012 at 04:32 AM..
ကိုစံငြိမ်း, ငပေကြီး, ဇာနည်စိုး, သက်ပိုင်ဦး, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်မင်းကို, bagothar85, crush, goldstar, KZaw, nandarnaing007@gmail.com, pannuko, tu tu
အခုလိုရှင်းပြပေးတဲ့ azp09 ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းနယ်မှာ Cyberဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် ဖွင့်ထားပါတယ်။ မရှက်တမ်း ၀န်ခံရရင် Network ပိုင်း၊ Computer ပိုင်းကို မကျွမ်းကျင်ပါဘူး ။ ဒီ မြန်မာမိသားစု ဖိုရမ်က အကူအညီတွေအများကြီးနဲ့ မြေစမ်းခရမ်းပျိုးနေတာပါ ....။ ကျွန်တော် SkyNet Connection ကိုသုံးထားပါတယ်။ ဆိုင်မှာ TP-LINK (TL-WR941N) Router တစ်လုံးသုံးထားပါတယ်။ Wifi အနေနဲ့က TP-LINK (TL-WA5210G)6လုံးသုံးထားပါတယ်။ ( Network Box > Router > AP(CPE) ) ပုံစံနဲ့ သုံးထားပါတယ်။ လောလောဆယ် ဖိုရမ်မှာရေးပေးထားတာတွေ၊ web မှာရှာဖတ်တာတွေနဲ့ စမ်းပြီး လုပ်ကြည့်တာ အဆင်ပြေသလိုလိုတော့ရှိပါတယ်...။
(ကျွမ်းကျင်တဲ့သူကို ခေါ်ပြီး လုပ်ချင်ပါတယ်...။ ဒါပေမဲ့ ငွေကြေးကုန်ကျမှာကို နှမြောမိသလို နယ်မှာဖြစ်နေတော့ လုပ်ပြီးမှ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ကိုယ်လည်းဘာမှမတတ်တော့ ဘာမှမလုပ်တတ် ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါ...။ အခုလို စာတွေဖတ်ပြီး စမ်းလုပ်ကြည့်ရတာ အချိန်တွေပေးရ၊ လူပင်ပမ်း စိတ်ပင်ပမ်း တော့များပေမဲ့ အတတ်ပညာတစ်ခုအတွက် အသိပညာ တိုးလာတာ အမှန်ပါ...။ ဒီ့အတွက် ဖိုရမ်မှ သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာ များအားလုံးကို ဒီနေရာလေးက ဂါရ၀ ပြုမိပါတယ်.. )
ကျွန်တော့်မှာ အဓိကကျတဲ့အခက်အခဲ တစ်ခုရှိနေပါတယ်...။ Wifi ယူသုံးတဲ့သူတွေက နာရီနဲ့ သုံးချင်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ရန်ကုန်သို့ရောက်တုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်မှာ သုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ အချိန်မှာ ဆိုင်က ရောင်းပေးတဲ့ username, password ရိုက်ပြီး ၀င်လိုက်ရုံပါဘဲ။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလိုပေးချင်ပါတယ်။
TP-LINK (Router, CPE) လောက်နဲ့ ရနိုင်ပါမလား?
သေချာနားမလည်သေးပါ။ သူငယ်ချင်းကတော့ပြောပါတယ်။ hotspot software သုံးပြီး Network Card နှစ်ခု သုံးရတယ်ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ Network card နှစ်ခုရှိပေမဲ့ ကျွန်တော် Download ဆွဲလို့ရတဲ့ Hotspot Software က Key မရှိတော့ Full Version မဖြစ်ပါ။ နောက်ပြီး Configuration ပိုင်းနားမလည်တော့ အဆင်မပြေပါ။ စမ်းကြည့်ပါသေးတယ်။
ဒီအတွက်လည်း ကူညီပြီး အကြံဥာဏ်ပေးစေချင်ပါတယ်...။ လေ့လာလို့ရနိုင်မဲ့ နေရာလေးတွေလည်း ညွှန်းပေးစေချင်ပါတယ်။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် .....
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ ဇာနည်စိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, သက်ပိုင်ဦး, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, အောင်မင်းကို, azp09, crush, ko lin
ကိုဇာနည်စိုးေ၇ ပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.... ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ TPlink CPE ဘူး နဲ့ internet sharing ကို .... လစဉ်ကြေး နဲ့ပဲယူကြပါတယ်....ဆိုတော့ ကိုဇာနည်စိုး ပြောတဲ့ hotspot sofware ကို မသုံးဖူးပါ.... ၇န်ကုန် တစ်ချိူ့နေ၇ာတွေမှာတော့ သုံးနေတာကိုတွေ့ ဘူးပါတယ်.... ဥပမာ browser ကနေ link တစ်ခုကို ခေါ်လိုက်တာနဲ့ user name နဲ့ password ကိုလာတောင်းတာပါ ......
ဒီနေ၇ာလေး မှာ တော့ Antamedia Hotspot 1.4.6 version ကိုတင်ပေးထားတာကိုတွေ့မိပါတယ် ..... ဒေါင်းလို့၇လာမဲ့ rar file ထဲမှာ Antamedia Hotspot 1.4.6 sofware , crack အတွက် exe file , Antamedia Hotspot 1.4.6 ကို ဘယ်လိုအသုံးပြု၇မယ် ဆိုတာကို ပုံများဖြင့် အသေးစိတ် ၇ှင်းပြထားတဲ့ PDF file တစ်ခုပါ ပါဝင် ပါတယ်....
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ azp09 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ဇာနည်စိုး, နီထွန်းဦး, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်မင်းကို, bagothar85, crush, konge, KZaw, tu tu
AP ROUTER mood
ဒီတခါတော့ AP Router mood နဲ့ လွင့်တဲ့ ပုံကိုေ၇းပါ့မယ်... (AP mood နဲ့လွင့်တဲ့ ပုံစံကိုတော့ အပ်ါမှာေ၇းခဲ့ပြီး ပါပြီ ) AP Router mood နဲ့ လွင့်တဲ့ ပုံကလည်း အပေါ်မှာ AP mood နဲ့လွင့်တဲ့ ပုံနဲ့ သိပ်ပြီးတော့ ကွာခြားမှုတော့ သိပ်မ၇ှိပါဘူး...
ပထမဆုံးကတော့ ဘာမှမလုပ်ခင် အပေါ်မှာေ၇းခဲ့သလို CPE ဘူး၇ဲ့ configure page ထဲ ကို အ၇င်ဝင်ပြီး DHCP မှာ DHCP Enable ကို နှိပ်ပြီး save နဲ့ထွက်ပေးပါ ... ပြီး၇င် DHCP Enable ၇ဲ့ effect သက်ေ၇ာက်စေဖို့ အတွက် CPE ဘူးကို restart တစ်ခါချလိုက်ပါ .... restart ကနေတက်လာပြီဆိုတာနဲ့ DHCP ကို Enable ထားပြီးတာ ဖြစ်သောကြောင့် ..... CPE ဘူးထဲကိုဝင်ဖို့ အတွက် TCPIP ကို သတ်မှတ်ပေးစ၇ာ မလိုတော့ ပါဘူး....
အထက်တွင်ပြထားသောပုံ အတိုင်း TCPIP ကို obtain ထားပြီးတော့ မိမိ CPE ဘူး၇ဲ့ LAN ip ကို browser ကနေ ၀င်လိုက်ပါ....
Quick Setup >Next > AP Router > ကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ အောက်ဖေါ်ပြပါ Message box ကျလာပါက OK ပေးပါ
Next > Dynamic ip >Next >
ဒီနေ၇ာမှာတော့ SSID Name ကိုပေးပါ ... ပြီး၇င် Mood ကို 54Mbps (802.11g) သို့ပြောင်းပေးပါ...
ပြီး၇င် Next > Finish ကိုနိပ်ပါ...
ဒါဆို၇င်တော့ AP Router mood နဲ့လွင့်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ....
security အတွက် WPA2 KEY ကတော့ အပေါ်ကအတိုင်းပဲထည့်၇ုံပါပဲ...
အကယ်၍ router (သို့) skynet ၇ဲ့ ip ဖြစ်တဲ့ 192.168.1.1 ကို ping ကြည့်လို့ ping လိုင်းတက်ပြီး internet မ၇၇င် အောက်ဖေါ်ပြပါအတိုင်း ... Satus > Network > WAN ထဲကို ၀င်ပြီး MTU Size မှာ 1500 ၇ှိ/ မ၇ှိ ဆိုတာ ကိုတစ်ချက် စစ်ပေးပါ
AP router mood နဲ့ လွင့်၇င်လည်း အပေါက AP mood နဲ့လွင့်သလိုပဲ main router ၇ဲ့ ip ဟာ 192.168.10.1 ဖြစ်တယ်ဆို၇င် CPE ဘူး၇ဲ့ ip ကို 192.168.20.1 လို့ထားပေးပါ....
အဲလိုမထားပဲ main router ၇ဲ့ ip ဟာ 192.168.10.1 ထားပြီး CPE ဘူး၇ဲ့ ip ကို 192.168.10.X လို့ထား၇င် လည်းမ၇ပါဘူး (ဆိုလိုတာကတော့ ip တွေဟာ CLASS C ဖြစ်တဲ့ အတွက် တတိယမြောက် Octet တွေကိုမတူအောင် ထားပေးပါ )
Last edited by azp09; 03-05-2012 at 03:33 AM..
$ညိုမင်းလွင်$, ပလူးစ်, မျိုးဟန်ထက်, သက်ပိုင်ဦး, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်မင်းကို, crush, Ko LayMyo, tu tu
ဒီတခါတော့ လွင့်တဲ့ CPE ဘူးထဲကနေ ပြီးတော့ MAC filter လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုေ၇းပါ့မယ်...တစ်ချို့ကလည်း Router မသုံးပဲ Switch ကနေ ပြီး CPE ကို တိုက်၇ိုက်သွားကြတာလည်း၇ှိတယ်ဆိုတော့....
အောက်တွင်ပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်း wireless > Mac Filtering ထဲကိုဝင်ပြီး .... Filtering Rule ကိုတော့ Deny the stations not specified by any enabled entries in the list to access ကိုပြောင်းပေးပါ
ပြီး၇င်တော့ add New ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ အောက်ပါပုံအတိုင်း
MAC address မှာတော့ ဖမ်းမည့် client CPE ၇ဲ့ WAN MAC address ( Client CPE ၇ဲ့ WAN MAC address ဖြစ်၇ပါမည် .... LAN MAC address မဟုတ်ပါ ) ကို ဖြည့်ပေးပါ
Description: မှာတော့ client CPE နဲ့ပတ်သက်ပြီး မိမိမှတ်ထားချင်တာကိုထားပါ (ဥပမာ မိမိပေးထားတဲ့ client cpe ၇ဲ့လူနာမည်)
ပြီး၇င်တော့ ထုံးစံအတိုင်း Save ဖြင့်ထွက်၇ုံပါပဲ.....
အခုလိုမျိုး MAC Filter ဖြင့် filtering ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့် 100% မဟုတ်တောင် အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ ကိုယ့်၇ဲ့ wireless Network ဟာ လုံခြုံတယ်လို့ပြောလို့၇ပါတယ်... အခုလို Mac filtering လုပ်ထားခြင်းဖြင့် ကိုယ့် wireless network ၇ဲ့ security password ကိုသိ၇ုံတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ ကိုယ့် network ထဲကိုဝင်လို့မ၇တော့ပါဘူး ...ဒါပေမယ့် နည်းပညာ တွေဟာ အမြဲပြောင်းလဲ တိုးတက်နေတာဖြစ်တဲ့ အတွက် အမြဲသတိထားနေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်....
ကိုယ့် CPE ဘူးကို ဖမ်းယူသုံးစွဲနေတဲ့ Clinet list ကို စစ်ဆေးကြည့်ချင်သေးတယ်ဆို၇င်တော့အောက်ပါပုံအတိုင်း
ီံDHCP > DHCP Clients list ထဲမှာလည်းဝင်ပြီးတော့ မိမိပေးထားတဲ့ Client name ဟုတ်/မဟုတ် .... မိမိပေးထားတဲ့ MAC address ဟုတ်မဟုတ်တွေကိုလည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်
Last edited by azp09; 07-05-2012 at 09:12 AM..
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုစံငြိမ်း, ဇာနည်စိုး, သက်ပိုင်ဦး, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်မင်းကို, bagothar85, crush, lazyguylay, tu tu
ကျွန်တော်က TP Link WA7510N ကိုသုံးပြီး ဒီဖက်က Internet ကိုလွှင့်မယ်... ဟိုဖက်ကလည်း TP Link WA7510N ကိုပဲသုံးပြီး ပြန်ဖမ်းမယ်လို့စဉ်းစားထားတာ... အဲဒါ အကွာအဝေးက ၁မိုင်ခွဲလောက်ရှိတယ်ဗျ... ပြီးတော့ ကြားထဲမှာလည်း တိုက်တွေ အဆောက်အဦးတွေရှိတယ်.... အဲဒီ အကွာအဝေးဆိုရင် signal လွှင့်နိုင်မလားမသိဘူး.. ဖမ်းလို့ကောရမလား... အဲ ရခဲ့ရင်လည်း ဘယ် mode နဲ့ လွှင့်ပြီး ဘယ် mode နဲ့ ဖမ်းရမလဲဆိုတာလေးကို ပြောပြပေးပါဦး.. အကူအညီ တောင်းပါတယ်ဗျာ..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ lazyguylay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Originally Posted by lazyguylay
TP Link WA7510N ကတော့ 5GHZ frequency, 15dBi ကို သုံးထားတာဆိုတော့ လွင့်အားကော ... ဖမ်းအားကော ပိုမိုကောင်းမွန်တယ်လို့သိ၇ပါတယ်... နောက်ပြီးတော့ 5210(G) လိုင်းတွေနဲ့လည်း Channelေ၇ာထွေးမှုမ၇ှိတော့ဘူးပေါ့ ...
ဝေးဝေးကိုေ၇ာက်အောင်လွင့်ခြင်တယ်ဆို၇င်တော့ လွင့်မည့်ဖက်ကော , ဖမ်းမြည့်ဖက်ကော မြင့်လေကောင်းလေပါပဲ..... အခုဟာက ကြားထဲမှာတိုက်တွေ အဆာက်ကဦးတွေ၇ှိတယ်ဆိုတော့ .... CPE (၂ ဘက်စလုံးကို ) ခပ်မြင့်မြင့်သာထောင်ပါ.....ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ ၁မိုင်ကျော်ကျော် လောက်ကို 5210 (G) နဲ့သုံးတာ ကောင်းကောင်းမိပါတယ်... ဒီနေ၇ာကလေးမှာ tplink ၇ဲ့ 5210 (G) အတွက် transmit နဲ့ receive Wireless Calculator ကို သုံးပြီးတော့ လည်း wireless မိမည့် range ကိုတွက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
လွင့်မည့်ဖက် ကို AP Router Mode ဖြင့်လွင့်ပြီးတော့ ...ဖမ်းမည့်ဖက် ကိုတော့ AP Client Router mode ဖြင့်ဖမ်းပါ.... အပ်ါမှာ ကျွန်တော်ေ၇းထားတဲ့ post လေးတွေကို တစ်ချက်ပြန်ဖတ်ပေးပါ...ပေါ်မှာေ၇းထားတာကတော့ 5210 (G) အတွက်ေ၇းထားတာဆိုတော့ WA7510N အတွက်ဆို၇င်တော့ configure setting အနည်းငယ် ကွာခြားနိုင်ပါတယ်....
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ azp09 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဦး, ဇာနည်စိုး, ထွန်းမင်း, သက်ပိုင်ဦး, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, bagothar85, crush, lazyguylay, tu tu
အကိုရေ..အနော်လဲအကူအညီတောင်းပါရစေဗျာ..ကျွန်တော့်ဆီက ip Star ကနေပီး wifi လွှင့်မှာပါ။ ကျွန်တော့်မှာအဆင်သင့်ရှိနေတာ တွေက TL-WR941ND Router တလုံး၊ TP-LINK TL-5210G တခုနဲ့ OMNI intena တခုရယ်ရှိပါတယ်။ဒီဘက်ကလွှင့်မှာကဒါတွေ နဲ့ပါ။ အဓိကလွှင့်ဖို့စိတ်ကူးထားတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီက စာကြည့်တိုက်အတွက်ပါ။စာကြည့်တိုက်နဲ့ ကျွန်တော့်နေရာက မီတာ ၁၆၀လောက်ဝေးပါတယ်။အဲဒါ CPE တလုံးတည်းနဲ့အဆင်ပြေနိုင်ပါသလား၊နောက်တခုထပ်တပ်စရာလိုသေးသလားဗျာ။တကယ်လိုိ့မလိုဘူးဆိုရင်လဲ ကျွန်တော့်ဆီကနေ Configure ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသလဲခင်ဗျာ။လောလောဆယ်တော့ configure ကလုပ်ပီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် router ကနေတော့ အင်တာနက်သုံးတာအနီးနားကရနေပါတယ်။စာကြည့်တိုက်ကတော့မရသေးပါ။ router ကိုတော့ password ပေးထားပါတယ်။ အဲ့ router ကနေပြီးတော့ CPE ကို LAN ပေါက်ကနေသွားထားပါတယ်။ သူ့အတွက်လဲ Configure လုပ်ထားပါ တယ်(စာဖတ်ပီး၊လုပ်လို့ရသလောက်ပေါ့)။သူ့ကိုတော့ Security လုပ်မထားပါဘူး၊အလွယ်စမ်းလို့ရအောင်ပါ။ ဒါပေမယ့် CPE ကနေ wifi မထွက်ဘူးလို့ထင်နေပါတယ် ၊နီးတဲ့နေရာလောက်သာဖမ်းမိပြီး စာကြည့်တိုက်နေရာကတော့ မမိဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အကိုပြော သလို စာကြည့်တိုက်ဘက်ကနေ CPE တလုံးထားဖို့်လိုပါသေးသလားဗျာ။ စာကြည့်တိုက်နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွေပေးလို့ရအောင် ကျွန်တော်က OMNI Interna တချောင်းတောင်ဝယ်လာခဲ့မိပါသေးတယ်၊(တတ်လို့တော့မဟုတ်ပါ၊ဆိုင်ကပြောလို့ပါ) အဲ့တော့အခု အားလုံးတော့တပ်ဆင်ပီးပါပီ၊ဒါပေမယ့် wifi ကထွက်သင့်သလောက်မထွက်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်၊ကျွန်တော့စိတ်ထဲမှာ intenna strength မတက်လို့ထင်ပါတယ်။ intenna strength ကလုံးဝမတက်ပါဘူး။ no signal တောင်ဖြစ်နေပါသေးတယ်၊ configure လုပ်တာများမှားနေလို့ပါလား၊ကျွန်တော်လဲလုပ်ကြည့်တာဘယ်လိုမှအဆင်မပြေပါဘူးဗျာ။စာကြည့်တိုက်က ၁၆ ရက်နေ့ဖွင့်ပွဲ။ ကျွန်တော့ဆီကအင်တာနက်ကမရ၊တော်၂ခေါင်းခြောက်ရပါတယ်ဗျာ၊ကူညီပါဦး အကိုရာ၊ (azp09) ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဗျာ။ လိုအပ်တာလေးတွေလမ်းညွှန်ပေးပါ၊ ကျေးဇူးပါဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ထွန်းမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, azp09, crush, lazyguylay
Find More Posts by ထွန်းမင်း
14-05-2012, 12:55 AM
Originally Posted by ထွန်းမင်း
TP-LINK TL-5210G ကိုဘာ Mode သုံးပြီးလွင့်လဲမသိဘူး... ( AP လား , AP Router လား ) AP Router mood ကို သုံးကြည့်ပါ......
AP Router mood ကိုသုံးပါက ........ ပထမဆုံး CPE ထဲကို ၀င်ပြီးတော့ configure page မှာ DHCP ကို enable ပေးလိုက်ပါ ( default က disable ပါ )
ပြီး၇င် save နဲ့ထွက်ပြီး cpe ဘူးကို restart တစ်ခါချပါ... restart ကနေ ပြန်ပြီးတက်လာ ပြီဆိုမှ ဒီ post အတိုင်း ဆက်ပြီး လုပ်ကြည့်ပါ
အဲဒီမှာ အေ၇းကြီးတဲ့ အချက်ကတော့ TL-WR941ND Router ၇ဲ့ ip ဟာ 192.168.10.1 ဖြစ်နေတယ်ဆို၇င် CPE ဘူး၇ဲ့ ip ကို 192.168.20.1 လို့ထားပေးပါ... အဲလိုမထားပဲ Router ၇ဲ့ ip ကို 192.168.10.1 ထားပြီး CPE ဘူးကို 192.168.10.X လို့ထား၇င်လည်းမ မိပါဘူး (X =1 to 254)
မီတာ 160 ဝေးတဲ့စာကြည့်တိုက် ကနေ laptop (သို့) usb wireless adapror ကနေဖမ်းတာလို့ထင်ပါတယ်
AP Router Mood ကိုသုံး၇င် ........... စာကြည့်တိုက်နဲ့ CPE ဘူး ကို မျက်နှာချင်းဆိုင် ထား၇င်တော့ 160 မီတာလောက် ဆို၇င်တော့ CPE နောက်ထပ် ၁ ဘူး ထောင်စ၇ာမလိုပဲ မိမယ်ထင်ပါတယ်..... စာကြည့်တိုက် ကို CPE ရဲ့ နောက်ကျောပေးထား၇င်တော့ မိမယ်မထင်ဘူး..... အဲဒီတချက် ကိုလည်း စစ်ကြည့်ပါဦး
နောက်တစ်ခုက CPE ဘူး၇ဲ့ LAN port နဲ့ power ကျွေး၇တဲ့ adaptor အဖြူေ၇ာင်လေး ၇ဲ့ POE တို့ကို ဆက်သွယ်တဲ့ UTP CABLE ဟာ CAT6ဖြစ်၇ပါမယ် ( CAT5တို့ , CAT5eတို့ ) ဆို၇င်လည်း အဆင်မပြေတတ်ပါဘူး (ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါတိုင်ပတ်ဘူးပါတယ် ) CAT6တွေက ကြိုး အပြာေ၇ာင် ပိုပြီးတော့လည်းတုတ်ပါတယ်..... နောက်ပြီး UTP cable ကို Straight ညပ်ပါ.....
အထက်ပါ နည်းများကို စမ်းပြီးတာတောင်မှ စာကြည့်တိုက် ဖက်ကနေ ဖမ်းလို့မ၇သေးဘူး , နောက်ထပ် CPE ဘူးတစ်လုံး ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ မ၀ယ်ချင်ဘူးဆို၇င်တော့ repeater mood ကိုစမ်းကြည့်ပါ
Last edited by azp09; 14-05-2012 at 12:57 AM..
ကိုဦး, ဆိုင်နင်ဂျူး, ဇာနည်စိုး, ထွန်းမင်း, သက်ပိုင်ဦး, မောင်သံသရာ, crush, lazyguylay, zo
အကိုရေ..အနော်လဲအကူအညီတောင်းပါရစေဗျာ..ကျွန်တော့်ဆီက ip Star ကနေပီး wifi လွှင့်မှာပါ။ ကျွန်တော့်မှာအဆင်သင့်ရှိနေတာ တွေက TL-WR941ND Router တလုံး၊ TP-LINK TL-5210G တခုနဲ့ OMNI intena တခုရယ်ရှိပါတယ်။......... စာကြည့်တိုက်နဲ့ ကျွန်တော့်နေရာက မီတာ ၁၆၀လောက်ဝေးပါတယ်။..........လောလောဆယ်တော့ configure ကလုပ်ပီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် router ကနေတော့ အင်တာနက်သုံးတာအနီးနားကရနေပါတယ်။စာကြည့်တိုက်ကတော့မရသေးပါ။ ........... CPE ကနေ wifi မထွက်ဘူးလို့ထင်နေပါတယ် ၊နီးတဲ့နေရာလောက်သာဖမ်းမိပြီး စာကြည့်တိုက်နေရာကတော့ မမိဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အကိုပြော သလို စာကြည့်တိုက်ဘက်ကနေ CPE တလုံးထားဖို့်လိုပါသေးသလားဗျာ။ .......... ကျွန်တော်က OMNI Interna တချောင်းတောင်ဝယ်လာခဲ့မိပါသေးတယ်၊(တတ်လို့တော့မဟုတ်ပါ၊ဆိုင်ကပြောလို့ပါ) အဲ့တော့အခု အားလုံးတော့တပ်ဆင်ပီးပါပီ၊ဒါပေမယ့် wifi ကထွက်သင့်သလောက်မထွက်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်၊................ configure လုပ်တာများမှားနေလို့ပါလား၊ကျွန်တော်လဲလုပ်ကြည့်တာဘယ်လိုမှအဆင်မပြေပါဘူးဗျာ။စာကြည့်တိုက်က ၁၆ ရက်နေ့ဖွင့်ပွဲ။ ကျွန်တော့ဆီကအင်တာနက်ကမရ၊တော်၂ခေါင်းခြောက်ရပါတယ်ဗျာ၊ကူညီပါဦး အကိုရာ၊ (azp09) ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဗျာ။ လိုအပ်တာလေးတွေလမ်းညွှန်ပေးပါ၊ ကျေးဇူးပါဗျာ။
ကိုထွန်းမင်း ခင်ဗျာ ....
ကျွန်တော်သိသလောက်လေး ၀င်ဆွေးနွေးပေးပါ့မယ် ။
ကိုထွန်းမင်း ပြောတဲ့အထဲမှာ ပါတဲ့ Router နဲ့ စာကြည့်တိုက်က 160 မီတာ(၅၂၅ ပေ (သို့) ၁၇၅ ကိုက် ) ဆိုတဲ့ အကွာအဝေးက Wifi Connection အတွက် ပြဿနာမရှိနိုင်တဲ့ အကွာအဝေးပါ။ ဒါပေမဲ့ ကြားမှာ အဆောက်အဦးအကြီးတွေ၊ သစ်ပင်ကြီးတွေ ခံနေမယ်ဆိုရင်တော့ ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေအောင် လုပ်ယူလို့ ရပါတယ် ....။ ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ .....။
(၁) CPE ကို Router ရှိတဲ့ဘက်မှာ ထားပြီး သုံးမယ်ဆိုရင် ......
အရင်ဆုံး ကိုထွန်းမင်း ရဲ့ Router Configuration ထဲမှာပေးထားတဲ့ SSID (name) နဲ့ Security key လေးကိုတော့ မှတ်ထားပေးပါ။ DHCP ကို Enable ပေးထားပါ။
ပြီးရင် သီးခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ CPE ကိုချိတ်ဆက်ပြီး ကို azp09 ရဲ့ Post No.1 မှာရှင်းပြထားသလို AP mode နဲ့ Configuration ၀င်လိုက်ပါ ....။ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ SSID အမည်ကိုတော့ မှတ်ထားပါ။ DHCP ကို Enable ပေးထားပါ။
Security key ထည့်၇န်အတွက် Menu table ထဲမှ wireless > security setting > Disable Security ကို WPA-PSK/WPA2-PSK သို့ ပြောင်းပေးပါ version ကိုလည်း WPA2-PSK သို့ပြောင်းပေးပါ။ PSK Passphrase: နေ၇ာမှာ မိမိပေးချင်တဲ့ password ကို၇ိုက်ပါ ...အားလုံးပြီး၇င်တော့ ထုံးစံအတိုင်း save နဲ့ထွက်ပါ....။
ဒါက ကို azp09 ရှင်းပြထားတာပါ။
ကိုထွန်းမင်း အနေနဲ့ ကိုယ်ထားချင်တဲ့ Security Key type ကိုရွေးပြီး ထားနိုင်ပါတယ် ....။ အားလုံးကို လွတ်လပ်စွာ သုံးစေချင်တယ်ဆိုရင် မပေးထားလဲ ရပါတယ်။
Network Cable (CAT 6) တစ်ချောင်းနဲ့ CPE ဘူးရဲ့ အောက်ခြေ LAN port ကနေ ဘူးအဖြူလေးရဲ့ PoE port သို့ ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။
နောက် Network cable(CAT 6) တစ်ချောင်းနဲ့ အဲဒီဘူးဖြူလေးရဲ့ LAN port ကနေ Router ရဲ့ LAN port တစ်ခုခုသို့ ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။
CPE ကို စာကြည့်တိုက်ဘက်သို့ မျက်နှာမူပြီး တိုင်နဲ့ထောင်လိုက်ပါ။(ကြားခံအဆောက်အဦ၊ အပင်တွေရှိရင် တိုင်မြင့်မြင့်သုံးပြီး CPE ကို အောက်သို့ ငိုက်ထားပေးပါ။)
CPE ကို Power ကျွေးလိုက်ပါ။
ပြီးတာနဲ့ စာကြည့်တိုက်ဘက်ကနေ ကွန်ပျူတာနဲ့ Wireless Connection ကို စမ်းကြည့်ပါ။ (အဲဒီကွန်ပျူတာမှာ ip ကို Obtain ထားပေးရပါမယ်။) CPE ဘူးမှာပေးထားခဲ့တဲ့ SSID name နဲ့ Wifi connection တွေ့ရင် ကိုယ်ပေးခဲ့တဲ့ Security Key နဲ့ဝင်လိုက်ပါ။
(၂) CPE ကို အလယ်မှာ ထားကြည့်ရအောင် ....
ဒီနည်းကတော့ စဉ်းစားကြည့်တာပါ ....။
ကိုထွန်းမင်း ရဲ့ Router Connection ရနိုင်တဲ့နေရာလောက်( စာကြည့်တိုက်နဲ့ Router ကြားနေရာတစ်ခုပေါ့) မှာ လျှပ်စစ်သုံးလို့ ရနိုင်မယ် ဆိုရင် .... ဒီလိုစမ်းလို့လဲ ရနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့် Router ရဲ့ SSID အမည်နဲ့ Security Key ကိုမှတ်သားထားပါ။
CPE ကို Operation Mode > AP Router သို့သွားပြီး Save ကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးရင် Wireless > Wireless Mode > သို့သွားပြီး ညာဘက်မှာ Universal Repeater ကိုရွေးပေးပါ။ အဲဒီအောက်က MAC of AP အကွက်မှာ Click တစ်ချက်ခေါက်ပြီး စာမျက်နှာအောက်ဆုံးနားက Survey ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ။
Box တစ်ခုပွင့်လာပါမယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကိုထွန်းမင်း ရဲ့ Router SSID အမည် ကိုတွေ့ရပါမယ်။ သူ့ရဲ့ ညာဘက်အစွန်က Connect ကို Click နှိပ်လိုက်ပါ။
ခုနက ပေးထားခဲ့တဲ့ Universal Repeater ရဲ့ အောက်ကအကွက်မှာ Router ရဲ့ MAC Address ကိုတွေ့ရပါမယ်။
CPE Configuration windows ရဲ့ Wireless > Security Setting > သို့ဝင်ရောက်ပြီး ကိုထွန်းမင်း ရဲ့ Router မှာပေးထားတဲ့ Security Key အတိုင်း တူညီအောင်ပေးလိုက်ပါ။(လွဲ၍မရပါ။)
ပြီးရင် DHCP > DHCP Settings ကိုဝင်ပြီး ညာဘက်မှာ Enable ပေးလိုက်ပါ။( ဒီနေရာမှာ Dafault Gateway အနေနဲ့ ကိုထွန်းမင်း ရဲ့ Router ip ကိုထည့်ပေးရပါမယ်။ Primary DNS, Secondary DNS တွေက ကိုထွန်းမင်း သုံးနေတာတွေ ထည့်ပေးရပါမယ်။)
ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေပါပြီ။ ကျန်တာကတော့ CPE ရဲ့ Login User Name, Password ချိန်းတာတွေ၊ ip ချိန်းတာတွေကို ကိုazp09 ရှင်းပြသလို လုပ်ပေးရပါမယ်။
အားလုံးပြီးရင် Network Cable(CAT 6) တစ်ချောင်းနဲ့ CPE ရဲ့ LAN port ကနေ ဘူးအဖြူလေးရဲ့ PoE port သို့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် CPE ကိုသင့်တော်တဲ့နေရာမှာထောင်ပြီး စာကြည့်တိုက်ဘက်သို့ လှည့်ထားပါ။ Power ကျွေးလိုက်ပါ။
စာကြည့်တိုက် ကနေပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။
တစ်ခြားနည်း အနေနဲ့ကတော့ ....
ကိုထွန်းမင်း ဆီမှာရှိတဲ့ Omini Antenna ကိုသုံးကြည့်ကြတာပေါ့ ....
အဲဒီ Antenna မှာပါတဲ့ cable က တိုနေပါတယ်။ ကျွန်တော် စဉ်စားကြည့်တာက သူ့ကို Router နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး အပြင်မှာ ထောင်မယ်ဆိုရင် Connection Range တိုးလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ Antenna jumper Cable အရှည်တစ်ချောင်းလိုပါမယ်။
ကိုထွန်းမင်း ရဲ့ Router မှာပါတဲ့ Antenna တိုင်တစ်ချောင်းကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ၀ယ်ယူလာတဲ့ Antenna jumper Cable အရှည်ရဲ့ တစ်ဘက်အစကို တပ်ဆင်ပါ။
နောက်တစ်စ, ကို Omini Antenna နဲ့ဆက်သွယ်ပြီး အဲဒီ Omini တိုင်ကို အပြင်မှာ ထောင်ကြည့်ပါ။
စာကြည့်တိုက်မှာတော့ CPE ကို နည်းလမ်း(၂) မှာလို Configuration ၀င်ပြီးထောင်လိုက်ပါ။
အခုကျွန်တော်ရေးသားပေးတာတွေဟာ စဉ်းစားပေးတဲ့ အဆင့်ပါ။ တကယ်တမ်း ကိုထွန်းမင်း လုပ်တဲ့နေရာမှာ မြေနေရာ အနေအထားတွေကြောင့် အခက်အခဲတွေတော့ ရှိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ် .....။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ....
(၁) Network ရဲ့ သဘောတရားအရ ip တွေပေးရာမှာ မှန်ကန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် .....။ ကိုazp09 ရဲ့ Post တွေကိုသေချာဖတ်ကြည့်ရင် သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
(၂) Network တစ်ခုတည်း အနေနဲ့ဘဲ သွားမယ်ဆိုရင် SSID တို့ Security Key တို့ကလည်း တူရပါမယ်။
(၃) DHCP ကို Enable လုပ်ပေးပြီး Dafault Gateway , Primary DNS, Secondary DNS တွေကိုသေချာတိကျစွာ ပေးထားဖို့လိုအပ်ပါမယ် ....။
(၄) တစ်ဘက်ကနေ ၀င်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်း ကွန်ပျူတာရဲ့ ip ကို Obtain ပေးထားရပါမယ်။ (ကိုထွန်းမင်း နားလည်သဘောပေါက်ရင်တော့ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ပေးနိုင်ပါတယ်။)
ဒီလောက်ဆိုရင် လုံလောက်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်ပါ။ အခက်အခဲရှိရင် ထပ်ပြီး ဆွေးနွေးကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ ....။
စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲမတိုင်ခင် အဆင်ပြေချောမွေ့နိုင်ပါစေ ......။
Last edited by ဇာနည်စိုး; 14-05-2012 at 01:00 AM..
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုဦး, ထွန်းမင်း, မျိုးဟန်ထက်, သက်ပိုင်ဦး, တော်ဝင်ကျား, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, azp09, crush, Emc Arkar, lazyguylay, tu tu, zo
တိုင်ကပတ်သွားပြန်ပီဗျာ..လုပ်ကြပါဦး..ဘာလဲဆိုတော့ CPE ရဲ့DHCPမှာ Enable ပေးလိုက်ပြီးတော့ CPE ထဲဝင်လို့မရတော့ဘူး ဒီတော့အကိုတို့ပြောသလို AP Router mode ထဲဝင်လို့မရဖြစ်နေပြန်ပြီ။။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူးဗျာ..ကူညီကြပါဦး...
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ထွန်းမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အစ်ကိုရဲ့LAN IP ကို သေချာမှတ်ထားရမယ်ဗျ.... CPE ရဲ့ IP နဲ့ DHCP မှာပေးမဲ့ IP နဲ့က class တူရမယ်နော်.. ဥပမာ.. 192.168.1.1 က CPE ရဲ့LAN IP ဆိုရင် DHCP ရဲ့ IPကလည်း 192.168.1.100 to 192.168.1.199 ဆိုပြီး Default ပေးထားတာရှိတယ်.. အဲလို class လေးတူပါစေနော်... ဒါမှ အစ်ကိုရဲ့လက်တော့ပ်ကနေ CPE ထဲကို ဝင်ကြည့်ုလို့ရမှာဗျ... အစ်ကိုရဲ့ လက်တော့ပ်ကလည်း အဲဒီ လို 192.168.1.x ဖြစ်ပါစေနော်.. ဒါမှ မဟုတ် Obtain IP address automatically ကို ပြောင်းပေးထားလိုက်ပါ... ဒါပြီး ပြန်ဝင်ကြည့်ပါဦး..
နောက်ဆုံး မရဘူးဆိုရင်တော့ အောက်က ပုံစံလေး လုပ်ကြည့်ပါ..
အဲ...ခုလို CPE ထဲဝင်လို့ မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ အစ်ကိုရဲ့CPE ကို ပြန်ပြီး reset ချရပါလိမ့်မယ်..
CPE မှာ Reset ခုလုပ်လေးတစ်ခုပါတယ်ဗျ.. အဲဒါကို ဘော်ပင်လေးနဲ့ ၁၀ စက္ကန့်လောက် ဖိပြီး ပြန်လွတ်လိုက်ရင် Factory Default Setting ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...
ဒါဆိုရင် အစ်ကို ဘာမှ Configure မလုပ်ရသေးတဲ့ အနေအထားပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်..
အစ်ကို့ လက်တော့ပ်ကို IP ပြန်ပေးရပါမယ်... 192.168.1.x ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်...
ဒါမှ အစ်ကို CPE ကို ပြန်ဝင်လို့ရပါလိမ့်မယ်... CPE ရဲ့ IP ကတော ဗူးမှာ ရေးထားပါတယ်... များသောအားဖြင့် 192.168.1.254 ဒါမှ မဟုတ် 192.168.1.1 ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်...
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ lazyguylay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ထွန်းမင်း, တော်ဝင်ကျား, မောင်သံသရာ, azp09, crush, tu tu, zo
ဟုတ်ကဲ့ဗျာ..အဆင်ကတော့သိပ်မပြေသေးဘူး၊ browser ကနေ CPE ကို 192.168.1.254 နဲ့ဝင်တာ (http://192.168.1.254/localstart.asp) အဲ့လို error တက်နေတယ်ဗျာ..ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ.. လုပ်ပါဦး....
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ထွန်းမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, lazyguylay, zo
CPE ကို Reset လုပ်ကြည့်ပြီးပြီလား? လုပ်ပြီးရင် နောက်တစ်ခေါက်ပြန်စမ်းပါဦးဗျာ...
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ lazyguylay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
14-05-2012, 07:48 PM
(၁) ကိုမင်းထွန်း၇ဲ့ Laptop tcp ip configure မှာ Obtain ထားပြီးစမ်းကြည့်ပါ
(၂) ကိုမင်းထွန်း၇ဲ့ Laptop မှာ tcp ip ကို ( 192.168.1. (1 to 199 ) ထဲက နောက်ဆုံး Octet ကို သုံးလေးခု ပြောင်းပြီး ၀င်ကြည့်ပေးပါ... ဥပမာ 192.168.1.150 (သို့မဟုတ် ) 192.168.1.160 အစ၇ှိသည်ဖြင့် ..... ထားပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါ
(၃) နောက်ပြီး ၀င်တဲ့ browser မှာ proxy ကို ဖြုတ်ထားခြင်း ၇ှိ/ မ၇ှိ သေချာအောင် စစ်ကြည့်ပါဦး... browser မှာ proxy ထည့်ထား၇င် ဖြုတ်ပြစ်ပါ .... ပြီးမှ ၀င်ပါ
CPE power adaptor အဖြူေ၇ာင် လေးက Lan port နဲ့ Laptop က Lanport ကို တိုက်၇ိုက်ဆက်ပြီးတော့ စမ်းကြည့်ပါ (ပြောချင်တာက Main router နဲ့ မချိတ် ဆက်သေးပဲ .... CPE ဘူးကို laptop နဲ့ တိုက်၇ိုက် အ၇င်ချိတ်ဆက် ကြည့်ပါ )
အထက်ဖေါ်ပြပါနည်းများနဲ့ မ၇ဘူး ဆို၇င်တော့ .... lazyguylay ပြောသလို
CPE ဘူးမှာ ပါတဲ့ reset ခလုတ်ကလေး ကို 15 second ခန့် နိပ်ထားပါ (CPE ဘူးကို တော့ power ကျွေးထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့ )
ပြီး၇င် အစကနေပြန်ပြီးတော့ Laptop ၇ဲ့ TCP ip ကို 192.168.1.1 လို့ထားပြီး browser မှာ 192.168.1.254 လို့ ၇ိုက်ပါ.... ဒါဆို၇င်တော့ default username နဲ့ password ဖြစ်တဲ့ admin ကို ၇ိုက်ထည့်ပြီး configure page ကို ၀င်လို့၇ပါပြီ........
Last edited by azp09; 14-05-2012 at 07:54 PM..
$ညိုမင်းလွင်$, ထွန်းမင်း, မောင်သံသရာ, bagothar85, lazyguylay, tu tu, zo
အရင်ဆုံး ကိုထွန်းမင်းရဲ့ CPE ကို Reset ချလိုက်ပါ။ Reset ချဖို့အတွက် CPE ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ တပ်စရာမလိုပါ။ CPE ရဲ့ LAN port ကနေ ဘူးအဖြူလေးရဲ့ PoE Port သို့ Network ကြိုးနဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ ဘူးဖြူလေးကို Power ကျွေးလိုက်ပါ။ ခဏလောက်စောင့်ပါ။ ပြီးရင် အောက်မှာ ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ Reset အပေါက်လေးကို ဒုတ်ချောင်းလေး (သို့) ဘောပင် နဲ့ (၁၀) စက္ကန့်လောက် (တကယ်က (၈) စက္ကန့်လို့သိရပါတယ် ....။ အရေးကြီးတာက ကိုယ်ထိုးထားတဲ့ အချိန်မှာ CPE ရဲ့ နောက်က မီးအစိမ်းလေးတွေကို ကြည့်ထားပါ။ Wireless Signal Strength မီးစိမ်းလေးတွေရဲ့ ညာဘက်အစွန်ဆုံး မီးလုံးလေး Flash ဖြစ်သွားရင် လွှတ်လို့ရပါပြီ ။ ကိုထွန်းမင်း ထိုးထားတာကို လွှတ်လိုက်တာနဲ့ Wireless Signal Strength မီးစိမ်းလေးတွေအားလုံး တစ်ချက် လင်းသွားပါမယ်။ ပြီးရင် ငြိမ်းသွားပြီး Power မီးလေးသာ လင်းနေပါမယ် ။ ဒါဆိုရင် Reset ချတာပြီးဆုံးပါပြီ ။)
ပြီးရင် ကွန်ပျူတာနဲ့ မတပ်ခင်မှာ CPE တပ်ပြီး Configuration လုပ်မဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ ip ကို 192.168.1.100 ဆိုပြီးပေးလိုက်ပါ။(192.168.1.1 ကနေ 192.168.1.253 ထိကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ် ။ လောလောဆယ်ပေါ့ ) Subnet နေရာမှာ Click ခေါက်လိုက်ရုံပါဘဲ ။
ပြီးရင် CPE ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ တပ်လိုက်ပါ။ CPE မှာ Power မီးနဲ့ LAN မီး (၂) ခုလင်းနေပါမယ်။
RUN box ကိုခေါ်ပြီး cmd > Enter နှိပ်လိုက်ရင် Command ပွင့်လာမယ်။ အဲဒီထဲမှာ ping 192.168.1.254 လို့ရိုက်ပြိး Enter နှိပ်လိုက်ပါ။
Reply from 192.168.1.254 : bytes=32 time<1ms TTL=64
ဆိုပြီး (၄) ကြောင်းကျလာပါမယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ကိုထွန်းမင်း ရဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ CPE တို့ ချိတ်ဆက်မိပြီဆိုတဲ့ သဘောပါ။
ကို azp09 လည်းအများကြီးရှင်းပြပေးထားပါတယ် ....။
AP အနေနဲ့ Configuration စလိုက်ကြရအောင် ......
Browser တစ်ခုခုကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
Address Bar မှာ 192.168.1.254 ဆိုပြီးရိုက် Enter ခေါက်ပါ။
Configuration page ကျလာရင် ဘယ်ဘက်ခြမ်းက Quick Setup ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ညာဘက်မှာ ပေါ်လာတဲ့ထဲက Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ညာဘက်မှာဘဲ AP Client Router , AP Router , AP ဆိုတဲ့ သုံးခုထဲက AP ကိုရွေးပေးပါ။ Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ထဲမှာ SSID ကို ကိုထွန်းမင်းပေးချင်တဲ့ နာမည် ပေးလိုက်ပါ။(ဒီ နာမည် က CPE Wifi ရဲ့အမည်ပါ။) ပြီးရင် Next ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ပေါ်လာတဲ့ ထဲက Finish ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
CPE ကို Restart ချနေတဲ့အတွက် ခဏလောက်စောင့်ပေးပါ။ Status page သို့ ပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ (ကြာနေရင် Browser ကို Refresh လုပ်လိုက်ပါ။ )
နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းက Wireless ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Wireless Basic Settings သို့ရောက်သွားပါမယ်။ ညာဘက်ခြမ်း မှာ SSID ကို ခုနကပေးခဲ့တဲ့ SSID အတိုင်း ပေးလိုက်ပါ။( အောက်ဆုံးက Mode ကို 11Mbps (802.11b) သို့ပြောင်းထားလည်း အဆင်ပြေပါတယ် ..... ဘယ်လိုကွာလဲတော့ သိဘူးဗျ ) ပြီးရင် အောက်က Save ကိုနှိပ်ပါ။ CPE restart ကျပါမယ်။ ခဏလောက်စောင့်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့် Wireless Mode သို့ဝင်ကြည့်ပါ။ Access Point နေရာမှာရှိနေပါမယ် ။ သူ့အတိုင်းဘဲ ထားလိုက်ပါ။
(ဒီနေရာမှာ တစ်ခါတည်းဆွေးနွေးချင်ပါတယ် ....။ တကယ်လို့ AP Router အနေနဲ့ Configuration လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီ Wireless Mode မှာ Client (သို့) Repeater (သို့) Universal Repeater တစ်ခုခုကိုရွေးပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် MAC of AP အကွက်မှာ Click ခေါက်ပြီး အောက်ဆုံးက Survey ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ရင် Router ရဲ့ Network ကိုတွေ့ရပါမယ်။ ဘေးနားက Connect ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Router ရဲ့ MAC လာပြီးပေါ်နေမှာပါ။ ပြီးရင် Save လုပ်လိုက်ရင် ရပါတယ်။)
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ Wireless > Security Setting သို့သွားလိုက်ပါ။ ကိုထွန်းမင်း Router မှာပေးထားတဲ့ Security Setting အတိုင်း ပေးလိုက်ပါ။ ဘာမှမပေးဘဲ Disable Security ပေးထားရင်လည်းရပါတယ် ။ Save လုပ်လိုက်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ DHCP > DHCP Setting သို့ဝင်လိုက်ပါ။ DHCP Server ကို Enable ပေးလိုက်ပါ။ Default Gateway မှာ ကိုထွန်းမင်းရဲ့ Router ip ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။ Primary DNS , Secondary DNS တွေမှာ ကိုထွန်းမင်း သုံးနေတာတွေ သေချာထည့်ပေးပါ။ (iPSTAR ဆိုရင် 203.81.64.19 နဲ့ 203.81.64.20 ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။)
ပြီးရင် အောက်က Save ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
You have modified the system configuration, it will not take effect until the device reboot!
ဆိုပြီး အနီရောင်စာတန်းပေါ်လာပါမယ် ....။
ဘယ်ဘက်ခြမ်းက System Tools > Reboot သို့သွားပါ။ ညာဘက်မှာပေါ်လာတဲ့ Reboot ကိုနှိပ်ပါ။ box လေးတစ်ခုပေါ်လာရင် OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ .....။
CPE restart ကျပါမယ် .... ခဏစောင့်ပါ ။
CPE ကို Power ပိတ် ။
ကွန်ပျူတာမှာ တပ်ထားတဲ့ Network ခေါင်းကို Router ရဲ့ LAN port တစ်ခုခုမှာသွားတပ်။
CPE ကို Power ကျွေးလိုက်။
ပြီးရင် Laptop တစ်လုံးလုံးနဲ့ (Wifi device တစ်ခုခုနဲ့ ) စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် ကိုထွန်းမင်း ပေးခဲ့တဲ့ SSID နာမည်နဲ့ Wifi Connection တစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ၀င်လို့ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် .....။
CPE ကို ip ချိန်းပေးရပါမယ် .....။
CPE Configuration windows ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းက Network ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ip Address - 192.168.2.* ( * မှာ 1-254 ထိကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်။)
( တကယ်လို့ ကိုထွန်းမင်းအနေနဲ့ Router ip ကို Gateway ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် အပေါ်ဆုံးက ip Address မှာ 192.168.1.* အနေနဲ့ဘဲ ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ် .....။)
(ဒီ ip အကြောင်းတွေကို ကျွန်တော်အသေးစိတ်နားမလည်ပါ။ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ ခင်ဗျာ ....။)
ip ပေးပြီးရင်တော့ Save လုပ်လိုက်ပါ .....။
( 192.168.2.* လို့ပေးပြီး Save လုပ်လိုက်ရင်တော့ ဘာမှတက်လာမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး ...
ကိစ္စမရှိပါဘူး ..... ကွန်ပျူတာရဲ့ ip ကို အစောပိုင်းက ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ 192.168.1.100 အစား 192.168.2.100 လို့သွားပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ Browser ကို Refresh လုပ်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ။)
ip ပြောင်းပြီးရင် CPE ရဲ့ User name, Password တွေကိုပြောင်းပေးဖို့အတွက်
ဘယ်ဘက်ခြမ်းက System Tools > Password သို့သွားလိုက်ပါ ....။ ညာဘက်ခြမ်းမှာ ....
Old User Name - admin
Old Password - admin
New User Name - ကြိုက်တာပေးပါ။(မှတ်ထားပါ။)
New Password - ကြိုက်တာပေးပါ။ (မှတ်ထားပါ။)
Confirm New Password - အပေါ်က New Password ကိုဘဲပြန်ထည့်ပေးပါ။
Save လုပ်လိုက်ပါ။ ခုနက ပေးခဲ့တဲ့ New User Name, New Password တို့နဲ့ Log In ပြန်ဝင်လိုက်ပါ။
လက်ရှိ Configuration ၀င်နေတဲ့ computer ကို Wifi Connection နဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင် ip ကို Obtain မှာ ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ....။
အဆင်ပြေနိုင်ပါစေ ဗျာ .....။
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ ဇာနည်စိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ထွန်းမင်း, မျိုးဟန်ထက်, တော်ဝင်ကျား, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, azp09, bagothar85, lazyguylay, tu tu, zo
ခုလိုပြောပေးတာဝမ်းသာပါတယ်..ကျွန်တော်ခုအဆင်ပြေသွားတယ်ပြောရမလားပဲ..တနေ့လုံးတော့ခေါင်းခြောက်နေရတာ...စာလဲသင်ရ ဒီဘက်ကwifi လဲလုပ်ရနဲ့ တိုင်နဲ့လူနဲ့ပတ်နေတာပဲ.. ခုတော့ AP Mode နဲ့ပဲဝင်ဖြစ်ပီး.. DHCP မှာလဲ Disable ထားထားလိုက်ပါတယ်. တချို့ကပြောကြတယ်.. DHCP Enable မထားရဘူးလို့.. ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ကတော့ဘာမှမသိပဲ Disable ထားလိုက်တာ စာကြည့် တိုက်ကနေ ၃ တိုင်လောက်တက်တယ်ဗျ.. ဒီထက်လဲပိုမလုပ်ချင်တော့တာနဲ့ ဒီတိုင်းထားဖြစ်သွားတယ်.. ဘာမှတော့မဖြစ်လောက်ဘူး မလားဗျာ .. တခုခုမှ effect ရှိနိုင်တယ်ဆိုရင် ပြောပြပေးကြပါဗျာ... ဒီညတော့ဒီလိုနဲ့ CPE Signal ကအကုန်တက်လာတယ်ဗျ.. အမှားလို့ရှိနေသေးရင် (ခုနပြောသလို effect ရှိနေနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်အကြံပေးကြပါဦးဗျာ... )
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ထွန်းမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇာနည်စိုး, မျိုးဟန်ထက်, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, azp09, lazyguylay
DHCP Enable (or) Disable က ........ ကိုထွန်းမင်းပြောသလို ဘာ ပြသနာမှ မ၇ှိနိင်ပါဘူး..... အဆင်ပြေသလိုသာထားပါ.....
အခု ကိုထွန်းမင်း Reply အ၇ AP Mood ( DHCP Disable ) နဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်ထင်တယ်... CPE ၇ဲ့ DHCP ကို Disable ထားတော့ ကိုထွန်းမင်း၇ဲ့ TL-WR941ND Router ကနေ Client တွေကို ip ချပေးပါလိမ့်မယ်......
CPE မှာ DHCP ကို Enable ထားခဲ့၇င်တော့ CPE ၇ဲ့ DHCP client တွေကို ip ချပေးမှာပါ...
နောက်တစ်ခုက ကိုထွန်းမင်း က CPE ၇ဲ့ DHCP ကို disable ထားခဲ့တော့ CPE ဘူးထဲကို ၀င်ချင်တဲ့ အခါကျ၇င် TCP ip configure မှာ ကိုထွန်းမင်း၇ဲ့ CPE ဘူး၇ဲ့ LAN ip နဲ့ CLASS တူထာကိုထားပြီး ၀င်၇ပါမယ်..... Obtain ထားပြီးတော့ ၀င်၇င်တော့ ၇မှာ မဟုတ်ပါဘူး...
အကယ်၍ CPE DHCP ကို enable ထားမယ်ဆို၇င်တော့ CPE ဘူးထဲကို ၀င်တဲပအခါကျ၇င် computer TCP ip Configure မှာ Obtain ထား၇ုံပါပဲ....
Reply ကို ( အသေးစိတ်) စိတ်၇ှည်စွာဖြင့်ေ၇းသားပေးခဲ့တဲ့ ကိုဇာနည်စိုး ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်......
Last edited by azp09; 15-05-2012 at 08:50 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ azp09 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇာနည်စိုး, ထွန်းမင်း, ဖူးလေး, မျိုးဟန်ထက်, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, crush, lazyguylay, tu tu, zo
EnGenius ESR9753 Wireless Router thureinsoe Network ပိုင်းဆိုင်ရာ003-05-2011 06:31 PM
Internet Cable မှ laptop ဖြင့် Wireless lan ထောင်ခြင်း... Win Min Thu Network ပိုင်းဆိုင်ရာ 17 25-02-2011 12:44 AM